भारतसँग पराजित भएपछि महिला टोलीका प्रशिक्षक हरि खड्काले दिए राजीनामा ! - Merodesh.news
भारतसँग पराजित भएपछि महिला टोलीका प्रशिक्षक हरि खड्काले दिए राजीनामा !
पोखरा, २३ मंसिर । नेपालमा तेस्रो पटक आयोजना भएको दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) अन्तर्गतको महिला फुटबलमा भारतसँग पराजित भएपछि प्रशिक्षक हरि खड्काले राजीनामा दिएका छन् ।
सोमबार भएको फाइनल खेलमा भारतले आयोजक राष्ट्र नेपाललाई २–० गोलले हराउँदै स्वर्ण हात पारेपछि खड्काले राजीनामा दिएका हुन् । भारतसँग पराजित भएपछि पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै प्रशिक्षक खड्काले पद छाडेको घोषणा गरे । राजीनामा दिएपछि उनले हारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै महिला टोलीको प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएको बताए । तर उनले कुनै न कुनै रूपमा नेपाली फुटबलसँग आवद्ध हुने प्रतिक्रिया जनाए ।